चीनमा राजकीय भ्रमण होइन, मेला-महोत्सव - ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
लक्ष्मी लम्साल असोज ९
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग पूर्व राष्ट्रपति यादव
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि हालसम्म २ जना राष्ट्रपति र २ जना उपराष्ट्रपतिले पद सम्हालेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्य भएर १५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि डा रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भए। उनीसँगै उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भए।
यादव र झाको कार्यकाल सकिएपछि विद्यादेवी भण्डारी र नन्दबहादुर पुनले क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्।
राष्ट्रको सर्वोच्च गरिमामय पद सम्हालेपछि राष्ट्राध्यक्षको रूपमा अन्य देशमा हुने राजकीय भ्रमणलाई इज्जतका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यी अधिकांश उच्चपदस्थ व्यक्तित्वले दक्षिणी छिमेकी भारतको पटक पटक भ्रमण गरेका छन्। गणतन्त्रको एक दशक पार भइसक्यो, तर, कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखले उत्तरी छिमेकीको राजकीय भ्रमण गर्ने अवसर पाएका छैनन्।
बेइजिङस्थित ‘ग्रेटहल अफ द पिपुल्स’ मा पुग्न नपाएपनि अधिकांशले भने चीनका मेला–महोत्सव उद्घाटन समारोहमा भाषण गर्ने मौका चाहिँ अवश्य पाएका छन्।
पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादव
डा रामवरण यादवले ८ साउन २०६५ देखि १२ कार्तिक २०७२ सम्म नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका थिए। त्यसबीचमा उनले चीनको दुई पटक भ्रमण गरे, तर ती दुबै भ्रमण राजकीय थिएनन्।
१२ कार्तिक २०६७ मा शाङहाइ एक्स्पोको समापनमा डा यादवले भाग लिए। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा यादवको यो पहिलो चीन भ्रमण थियो। यादवले त्यतिखेर चिनियाँ प्रधानमन्त्री वन च्या पाउसँग भेट्ने मौका पाए।
यादवले १२-१५ चैत्र २०७१ मा चीनको हाइनान प्रान्तको पोआऊ एसिया फोरममा भाग लिए। त्यही बेला यादवले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटे र १८ चैतमा तिब्बतको ल्हासाबाट स्वदेश फर्किए। पोआऊ एसिया फोरमको साइडलाइन कुराकानीमा चिनियाँ समकक्षी सीले १ सय १५ किमीको अरनिको राजमार्ग लगायत यातायात पूर्वाधारको विकासका लागि साढे १४ बिलियनको आर्थिक सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेका थिए। तर उनलाई बेइजिङमा रातो कार्पेट बिछ्याउन कुनै तदारूकता देखाएनन्।
पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा
रामवरण यादवसँगै ८ साउद २०६५ देखि १४ कार्तिक २०७२ सम्म उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द झाले पनि २ पटक चीनको भ्रमण गरे। उपराष्ट्रपति झाले २०६७ कात्तिकमा चीनको छङ्तुमा भएको ‘११औँ वेस्टर्न चाइना इन्टरनेशनल फेयर’ मा भाग लिए।
पूर्व उपराष्ट्रपनि झा चिनियाँ टोलीसँग
त्यस्तै, चीनको युन्नान प्रान्तको खुन्मिङमा २३ २०७० देखि सुरू भएको प्रथम चीन-दक्षिण एसियाली एक्स्पोमा उपराष्ट्रपति झाले भाग लिए। एक्स्पो उद्घाटन समारोह पश्चात् उपराष्ट्रपति झाले राजधानी बेइजिङ र शाङ्हाई शहरको भ्रमण गरे। तर ५ दिवसीय भ्रमणमा झाले बेइजिङस्थित जनवृहत् सभाहलमा पाइला राख्न भने पाएनन्।
१२ कार्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने अवसर पाएपनि चिनियाँ भूमिमा टेक्न भने पाएकी छैनन्। २०७४ वैशाखको पहिलो साता उनले भारतको पाँच दिवसीय भ्रमण गरिन्।
हाल उनको फोटो बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा छ, तर उनको भौतिक शरीरले राष्ट्रपतिका रुपमा बेइजिङ टेक्न पाएको छैन। अघिल्लो कार्यकालमा चीन जान नपाएपनि जारी कार्यकालमा चीन भ्रमण गर्नेसक्ने उनको अपेक्षा होला।
१४ कार्तिक २०७२ को कात्तिक १४ मा उपरराष्ट्रपति पदमा पुगेका नन्दबहादुर पुनले चीन भ्रमणका क्रममा ह्याट्रिक गरिसके।
३० जेठ-३ असार २०७३ मा चीनको युनान प्रान्तको खुन्मिङमा भएको चौथो चीन-दक्षिण एसिया मेला तथा चौबीसौँ चीन कुन्मिङ आयात-निर्यात व्यापार मेलामा उनले भाग लिए।
त्यसपछि २२-२५ असार २०७४ मा चीनको मध्य भागमा पर्ने लान्चौ सहरमा २३औँ चीन लान्चौ लगानी तथा व्यापार मेलामा उपराष्ट्रपति पुन सहभागी भए। चीनले दक्षिण एसिया प्रस्थानको केन्द्रको रूपमा लिएको यस सहरबाट २०७३ वैशाख अन्तिममा काठमाडौँ लक्षित मालबाहक रेल तिब्बतको सिगात्से गएको थियो।
त्यस्तै, ३-८ असोज २०७५ मा ६ दिवसीय औपचारिक भ्रमणका लागि उपराष्ट्रपति पुनले सछ्वान प्रान्तको छङ्तुको यात्रा तय गरे। ४ असोजमा ‘१७औँ पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेला’ मा सहभागी भएर उपराष्ट्रपति पुनले लगातार ३ वर्षमा चीन यात्राको ह्याट्रिक पूरा गरेका छन्।
चीनको कान्सु, युन्नान र सछ्वान प्रान्त घुमेपनि बेइजिङको प्रशासनिक बाटो भने अझै खुलेको छैन।
उपराष्ट्रपति पुनसँग चीनका उपप्रधानमन्त्री हु छुन्ह्वा
बहस आफ्नो ठाउँमा होला, राष्ट्रपतिको जस्तो उपराष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ? यस्तो भ्रमणले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? तथापि नजिकैको छिमेकी भएर पनि नेपालका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि बेइजिङको प्रशासनिक केन्द्र यति दूर नहुनुपर्ने हो।
यति लामो समयसम्म पनि अवसर नआउँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि बेइजिङसम्मको यात्रा झन् झन् मृगतृष्णा बन्ने देखिन्छ। चीनको प्रशासनिक केन्द्र नपुगेपनि कतिपयले विशाल चीनका भूभागहरू टेकेर प्यास त मेटेको हुनुपर्छ।
चीनले निम्ता दिएर नेपालका राष्ट्रपति र उपरराष्ट्रपतिले भ्रमण गर्न पाएको भनेको मेला महोत्सव उद्घाटन र भाषणकै लागि मात्र हो। हालसम्मका भ्रमणले उनीहरूको गहिरो रूचि अर्थतन्त्रमा रहेको बुझिन्छ। उनीहरूको पृष्ठभूमिले कुनै अर्थशास्त्रीय झल्को नदिएपनि चिनियाँ मेला महोत्सवहरूमा उनीहरूको उपस्थिति फापेको नै देखिन्छ। यसबाट नेपालको उच्चपदमा रहेका व्यक्तित्वहरू अर्थतन्त्रका ज्ञाता नै रहुन् कि भन्ने आभाष पनि मिल्छ।
नेपाली राष्ट्रप्रमुखका लागि चीनको सर्वेसर्वा प्रशासनिक केन्द्र, बेइजिङको थ्यानआनमनस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुल्सको रातो कार्पेट कहिले सिंगारिने हो, यसै भन्न सकिँदैन। तर हालसम्मको परिदृष्य नेपालका राष्ट्रप्रमुखहरूको चीन यात्रा राजकीय हुन नसकेर मेला महोत्सवमय हुनेमै सीमित देखिन्छ।
प्रकाशित ९ असोज २०७५, मंगलबार | 2018-09-25 16:01:15